China Plastic PTFE Semi-otomatiki paaivaumba Machine Manufacturer uye mutengesi | SuKo
Plastic PTFE Semi-otomatiki richigadzirisa Machine
Sezvo PTFE isingayerere pamusoro peyakanyungudika, haigone kuumbwa jekiseni uye inoda matekiniki ekugadzirisa. Kuumbwa PTFE kunogadzirwa nekutanga compression kuumba iyo poda kuva preforms, uyezve sintering iyo preforms mune imwe nzira yakafanana neye sintered simbi yekugadzirisa. Maitiro aya anogadzira maumbirwo ejometri ayo anogona kugadzirwa, kusanganiswa, uye / kana kusunganidzwa.
Product Description nokuti Automatic richigadzirisa:
Otomatiki kuumbwa, semi-otomatiki fomu yekumanikidza kuumbwa, ndiyo nzira Suko inoshandisa kugadzirwa kwepakati-vhoriyamu kune hombe-vhoriyamu mambure yakaumbwa uye padyo nemambure akaumbwa PTFE zvikamu. Iyo otomatiki yekuumba maitiro inoda yakazvipira tooling, kazhinji inoda kushoma opareta kupindira uye epurasitiki zvikamu zvinogona kugadzirwa zvine kukurumidza.
Nekushandisa chaiko kwekushandisa nekugadzirisa, zvikamu zvakagadzirwa uchishandisa otomatiki kuumbwa maitiro zvinogona kugadzirwa kune mashoma padyo shiviriro, asi kwete kune iko kunyatso kukwana zvakazara machined chikamu. Zvinhu zvinoumbwa zvine hupfumi nekushandisa maitiro ekuzadza otomatiki efa mhango, kushandisa kumanikidza, uye chikamu kudzingwa.
Zvimwe zvakanakira iyo otomatiki Kuumbwa maitiro anosanganisira:
· Chishoma kana chisina chinhu marara kana ichienzaniswa neiyo "chaiyo" PTFE yekugadzirisa michina kubva kuzvitokisi (tsvimbo kana chubhu)
· Yakaderera chikamu chemutengo, uine mashoma kana dzimwe nguva pasina matanho ekugadzirisa anodikanwa
Zvinhu zvinoumbwa uye zvakasvinudzwa kuita mafomu ekupedzisira uye zvimiro zvakadzora kutadza kwekushushikana kana zvichienzaniswa nezvikamu zvemuchina (kubva pakucheka, kugaya, nezvimwewo)
Chigadzirwa Chigadzirwa cheKudzvanya Kuumbwa:
Sunkoo inopa kudzvanya kuumbwa kwe PTFE yekugadzirwa kwezvinhu zvemhando yekugadzira yako yepurasitiki chinhu. Kuomesa kuumba inzira yekuumba uko iyo resini poda inoiswa kumasimba akakwana emutsara mauto mune yakavharwa kufa seti yekugadzira tsvimbo yakasimba kana maumbirwo ehubhu.
Iyo Sunkoo Kuumbwa dhipatimendi ane kugona kuburitsa compression kuumbwa PTFE tsvimbo uye chubhu stock yekusangana uye kupfuura yako chaiyo maratidziro uye tolerances. Sunkoo ine anopfuura chiuru chemasikisi ekuumba maumbirwo emasheya kubva pa1 "OD kusvika 26" OD muMhandara PTFE, pamwe neese maindasitiri akajairwa uye echinyakare akasanganiswa zvinhu. Imwe yemabhenefiti ekumanikidza tsvimbo yakaumbwa kana chubhu ndiyo yakaderera mutengo weiyi nzira. Kazhinji hazvidi kushandiswa kwakakosha kupfuura izvo Sunkoo atova nazvo.
Iine huwandu hwakawanda hwemidziyo yemumba, Sunkoo ndiyo yako-yekumira sosi yekubata ese maficha ako ekumanikidza ekuumba echinhu zvinodiwa. Shevedza nyanzvi pa Sunkoo rubatsiro rwekukurumidza.
Anoziva Sunkoo vashandi vanogona kushanda newe kubva pane yekutanga pfungwa, kusvika kune dhizaini, kugadzira uye kupedzisa. Nehunyanzvi hwedu mune akasiyana epurasitiki zvigadzirwa, Sunkoo Inogona kukurudzira akanakisa epurasitiki resini, epurasitiki makomputa uye mafirita ekukudziridza mashandiro uye kuve anodhura-mune yako chaiyo application. Bata iyo Sunkoo tsvimbo uye ona kana otomatiki kuumbwa yakakodzera uye mari kune yako application.
Muenzaniso kwete Cylinder DIA Maumbirwo Simba reMagetsi
5T 200 * 200 70 kumusoro kudzvanya 1.1 KW
10T 200 * 200 Zana kumusoro kana pasi kudzvanya 1.5 KW
20T 250 * 250 40140 kumusoro kana pasi kudzvanya 1.5 KW
30T 300 * 300 Φ160 kumusoro kana pasi kudzvanya 0.75 KW + 1.1 KW
60T 350 * 350 220 kumusoro kana pasi kudzvanya 1.1 KW + 1.5 KW
100T 420 * 420 Φ280 kumusoro kana pasi kudzvanya 1.5 KW + 1.5 KW
150T 520 * 520 Φ320 kumusoro kana pasi kudzvanya 1.5 KW + 2.2 KW
200T 560 * 560 60360 kumusoro kana pasi kudzvanya 2.2 KW + 2.2 KW
300T 600 * 600 Φ420 kumusoro kana pasi kudzvanya 2.2 KW + 2.2 KW
400T 800 * 800 500 kumusoro kana pasi kudzvanya 2.2 KW + 3 KW
500T 1000 * 1000 Φ560 kumusoro kana pasi kudzvanya 2.2 KW + 5.5 KW
800T 1200 * 1200 750 kumusoro kana pasi kudzvanya 3 KW + 5.5 KW
1000T 1500 * 1500 800 kumusoro kana pasi kudzvanya 4 KW + 5.5 KW
1200T 1600 * 1600 900 kumusoro kana pasi kudzvanya 4.5 KW + 5.5KW
1500T 1800 * 1800 Φ1000 kumusoro kana pasi kudzvanya 4.5 KW + 5.5 KW
2000T 2000 * 2000 1100 kumusoro kana pasi kudzvanya 4 KW + 11 KW
2500T 1500 * 1500 1250 kumusoro kana pasi kudzvanya 5.5 KW + 11 KW
3500T 2400 * 2600 1500 kumusoro kana pasi kudzvanya 5.5 KW + 15 KW
5000T 2500 * 2800 Φ900 * 4 kumusoro kana pasi kudzvanya 7 KW + 22.5 KW
Na jamshed anwer :
Nguva dzose ndakave nebasa rakakura
Na Talebi :
Mitengo yakanaka uye yakanaka.
Na JEFF :
Hunhu hwakanaka !!